Python2 Lesson3- Khit Minnyo
Python-for-Hackers Python2 Lesson 3
Python2 Lesson 3
by KhitMinnyo on October 19, 2017 in Python-for-Hackers
.ဒီနေ့တော့ elif (else + if)အကြောင်းကို အရင်ဆုံး လေ့လာရအောင်ပါ။
if else ကိုတော့ နားလည်ထားပြီဆိုတော့ ဒီအဆင့်က သိပ်မခက်တော့ပါ။
ပိုရှင်းအောင် ဥပမာတစ်ခု ထပ်ပြောပါဦးမယ်။ 1 နဲ့2ဘယ်ဟာက ပိုကြီးလဲမှာ 1 က ကြီးတယ်ဆိုရင် မှားမယ်။ မကြီးဘူးဆိုရင် မှန်မယ်။
ဒီသဘောတရားမှာ ၂ခုပဲရှိတဲ့အတွက် if else နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။
2ခုထက် ပိုလာတဲ့ သဘောတရားတွေမှာတော့ if else နဲ့တင် အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ ဥပမာလေး ကြည့်ရအောင်ပါ။
Mg Mg, Ag Ag, Ma Ma နဲ့ Aye Aye ဆိုပြီး လေးယောက် ရှိတယ် ဆိုပါစို့။ Aye Aye ကို admin ထားမယ်ဆိုရင် အောက်ပါပုံစံမျိုးလေး ရေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက ရှေ့ သင်ခန်းစာမှာလိုပဲ if , elif ဆိုတဲ့ လိုင်းတွေရဲ့ အဆုံးမှာ (:) ထည့်ဖို့ မမေ့ဖို့ပါ။
အထက်ပါ လိုင်းတွေကို cmd ကနေသုံးတဲ့ python မှာ စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် name မှာ အေးအေးလို့ ဖြည့်ထားခဲ့တဲ့အတွက်
နောက်ဆုံး အဆုံးသတ် enter ၂ချက် ခေါက်တဲ့အခါ Aye Aye နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အဖြေတွေကို ထုတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
အလားတူပဲ name မှာ Mg Mg လို့ ဖြည့်ခဲ့ရင် Mg Mg နဲ့ဆိုင်ရာအဖြေ ထွက်လာမှာ ဖြစ်သလို အခြားသူတွေ ဖြစ်နေပါကလည်း
နာမည်တစ်ခုစီကို name မှာ ဖြည့်သွင်းရိုက်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်နာမည်လေးပါ ထည့်ရိုက်ပြီး စမ်းကြည့်နော် :)
ထို့အတူပဲ x တွေ y တွေနဲ့ variable တည်ဆောက်ပြီးလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
ကဲ နောက်တစ်ခု စမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်
print "You're wrong."
print " You're right."
print "You're right."
ခု လေ့လာမှာက increasement အပိုင်းပါ
variable တွေ တည်ဆောက်အသုံးပြုတဲ့အခါ တည်ဆောက်လိုက်တုန်းက တန်ဖိုးကို နောက်ပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲချင်ရင် increasement ကို သုံးရပါမယ်။ နမူနာ လေ့လာကြည့်ရအောင်
idle မှာ new file မခေါ်ဘဲ စမ်းကြည့်ရအောင်
ဆိုပြီး အဖြေထုတ်ပေးတာ တွေ့ရပါမယ်။ ပုံမရှင်းရင် ချဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
x=2 ဒီနေရာမှာ x တန်ဖိုး ၂ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်
x+2 ဒီမှာတော့ x ကို2နဲ့ပေါင်းပါတယ်
4 2+2 မို့4ရပါတယ်
x=x+1 ဒီမှာတော့ မူလရှိတဲ့ x တန်ဖိုးကို ၁ ထပ်တိုးပြီး အသုံးပြုမယ်လို့ ပြောလိုက်တာပါပဲ။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် တန်ဖိုးပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ x တန်ဖို3းဖြစ်သွားပြီနော်။
5 ၃ နဲ့ ၂ ပေါင်းတဲ့အတွက် အဖြေ ၅ ရသွားပါပြီ။
ကဲ ဆတိုးအနေနဲ့ ဒါလေး ထပ်စမ်းကြည့်ရအောင်
23 ဆိုပြီး ဖြစ်သွားပါပြီ။
...... x တန်ဖိုး ထပ်တိုးချင်ရင် ဒီလိုလည်း ရေးလို့ ရပါတယ် ...
>>> x -= 2
အဖြေကိုပါ သိရအောင် ဒီပုံစံပဲ တင်ပေးခဲ့တာပါ။ python ရေးကြည့်ဖို့အတွက် idle အစား ipython ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ In ဆိုတာ Input (ကိုယ်သွင်းလိုက်တဲ့ တန်ဖိုးလိုင်း)
Out ဆိုတာက Output (စက်က ပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ အဖြေလိုင်းပါ) အောက်မှာ ipython နဲ့ ရေးထားတာကို နမူနာ ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ကဲ ခုတော့ While Looping အကြောင်းလေးကို ဆက်ပြီး လေ့လာရအောင်ပါ။
In : x=2
In : while x <=10:
...: x += 2
...:(enter ၂ချက် ဆင်းမယ်နော်)
ဒီဥပမာလေးကို ကြည့်ပါ။ line2မှာ ဖော်ပြချက်ကို x <=10 ပဲ သုံးထားပါတယ်။
သဘောကတော့ x သည် 10 အောက် နဲ့ အလွန်ဆုံး 10 မှာပဲ အလုပ်လုပ်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
ဒါကြောင့် အဖြေထုတ်တဲ့အခါ ခုလို အစဉ်လိုက် ဖော်ပြစေတာပါပဲ။
ကဲ နောက်တစ်ခု စမ်းကြည့်ပါ။
In : y=1
In : while y >=10:
...: print y
...: y += 2
ဒီ problem မှာ ဘာလို့ အဖြေမထွက်ရတာလဲ
Question A: လို့ သတ်မှတ်ပြီး comment မှာ ဖြေခဲ့ပေးပါ။
ထုံးစံအတိုင်း enter ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာထူးခြားပါသလဲ။ looping တွေ အရမ်းများပြီး ထိန်းမရတော့ရင် python ပိတ်လိုက်နော်
In : z = 3
In : while z > 30:
...: print z
...: z *= 2
ကန့်သတ်အနေနဲ့ z ကို 30 ထက် ငယ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် 24 ထိပဲ ဆက်ပြီး ရပ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ looping လေးတွေမှာ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ += -= *= နဲ့ /= တွေ စုံအောင် လုပ်ကြည့်ပါဦး။
In : while x >= 100:
...: x /= 2
In : while x <= 100:
ဒီနေရာမှာတော့ 100 ကို ၂နဲ့စား 50
ထပ်စားနဲ့ နောက်ဆုံးထိ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖြေမှာ အများကြီး ဖြစ်သွားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေး ဆက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ
အောက်ပါ နမူနာလေးအတိုင်း ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
In : name = ""
In : while name != "Mg Mg":
...: name = raw_input("Try again\_n")
In : name = "" ဒီနေရာမှာ variable ကို unknown အနေနဲ့ပဲ ထားခဲ့တာပါ။
In : while name != "Mg Mg": ဒီနေရာရောက်မှ မောင်မောင်ကို လက်ခံနာမည်အဖြစ် သွင်းလိုက်တယ်။
...: name = raw_input("Try again\_n") ဒီနေရာမှာ user ကို ဖြည့်သွင်းခိုင်းထားတယ်
Try again (enter ၂ချက် ဆင်းတဲ့အခါ ဒီစာသား ပေါ်လာပါပြီ။ )
Mg Mg ဒီမှာ မောင်မောင်လို့ ဖြည့်လိုက်တော့မှပဲ အောက်ကို ဆက်သွားလို့ ရမှာဖြစ်ပြီး အခြား ဘာဖြည့်ဖြည့် ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေ့သင်ခန်းစာက အရေးအလွန်ကြီးလို့ ထပ်ခါထပ်ခါ လေ့ကျင့်ပါ။ ကိုယ်ပိုင် အသုံးပြုနိုင်အောင် လုပ်ပါလို့ ပြောလိုပါတယ်။
Lesson4ကြည့်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Anonymous August 10, 2019 at 11:06 PM
Question A: y=1
so y>=10 it's wrong.